Indlela ubuyekeze sesifufula?
Kusukela ngesikhathi lapho isivinini Inthanethi ayisekho ukubala e kilobits, kwaduma zomsebenzi sesifufula. Abasebenzisi abaningi computer zisebenzisa nezifufula okumelwe nokwabelana ngolwazi, kodwa bambalwa kakhulu abantu baqonde Umgomo we operation zalesi simiso. Endaweni yokuqala - wuhlelo lapho umjovo bese ubuyela amafayela kusuka kwikhompyutha yakho. Kodwa izinto zokuqala kuqala.
Sesifufula - kontanga eqondene olandelwayo, olwasungulwa Bram Cohen. Ekuqaleni, yasungulwa ngenhloso ngokushesha ngokudlulisela amafayela amakhulu phakathi ama-computers amabili. Igama elithi "wobungane" libhekisela yokuthi ukudluliswa akudingi khona amafayela kwiseva. Udinga ukufaka iklayenti ekhethekile kukhompyutha ukuthi ufuna ukubuyekeza ngezikhathi ezithile futhi zonke! manje Ungasabalalisa amafayela noma uwamukele.
Kodwa akunjalo okusheshayo. Exchange kwenteka ngekutsi bafundzi zomsebenzi okhethekile - amasayithi olwenziwa ukusatshalaliswa okuthiwa. Ukuya kwelinye lalawa amasayithi, ungakhetha ifayela oyifunayo. Futhi uyilande ngamazinga aphakeme isivinini kungenzeka. Ukuchofoza Tracker inkinobho ethi "Landa", uthola kukhompyutha yifayela elincane ayovuleka ngokusebenzisa isimiso esikhethekile. Kodwa ngaphambi kokuba lokho kunconywa ukubuyekeza sesifufula.
Ukuya esandleni, into yokuqala udinga ukuqinisekisa ukuthi isekelwa yi inombolo ezanele seeders. Siderov - abantu abanale ikhophi ephelele ifayela futhi ukulungele ukukunika uyilande. Kuyinto kule futhi lakha ikhono ukuze uthumele futhi wabelane ngamafayela nge sesifufula. Omunye unika, omunye amaphampu. Futhi isandla ongema eziningi seeders, ngakho yakho ijubane thwebula kuzokhawulelwa isiteshi Inthanethi. Indima Tracker sesifufula - ukusabalalisa seeders nontanga ukuze ukwabelana ifayela kwaba masinya. Kodwa kuzuba kangcono ukuxhumeka sesifufula, uzodinga Inthanethi broadband. Uma kukhona izinkinga ngokulanda, ungazama ubuyekeze sesifufula.
lokhu bheka kanjani like emsebenzini? Ake sithi ufuna ukulanda ama-movie amasha sesifufula, uya tracker, athungatha igama izandla, anikine ifayela sesifufula yakho nangawo wonke. Kodwa ngaphambi kokuba lokho kumele efakwe ku-PC yakho nohlelo olukhethekile, okuyothi ngalo ifayela lingavuleka.
Kuqondane ukuthi Tracker babeka izandla lapho amafayela ngezikhathi kulekelelwa, isibonelo, lokhu ochungechungeni TV ngawo uchungechunge ezintsha zingezwa. Ukulanda amafayela angekho, udinga nje ubuyekeze sesifufula.
Njengoba ubona, the zomsebenzi sesifufula zikuvumela ukuba bashintshisane amafayela amakhulu e ezimbili ukuchofoza igundane. Zonke kudingekile umculo albhamu, ungakwazi manje ukulanda ngesivinini. Wonke amabhayisikobho nezinhlelo ze imidlalo ayatholakala. Kodwa ungakhohlwa mayelana ne-copyright. Sesifufula zomsebenzi ngenkuthalo eziphula ke, isimo uzama ukuvimbela lokhu, kodwa okwamanje wonke umuntu ehluleka. Akwaziwa kuyomhambela kanjani nale ndaba esikhathini esizayo, kodwa ukuvala zomsebenzi sesifufula kuzobandakanya imikhawulo ezibucayi ukufinyelela kokuqukethwe.
By endleleni, le zomsebenzi sesifufula labasibekela ukwabelana ezihlukahlukene ifayela. Ngaphezu kwalokho, kokuba okuqukethwe okuhlukile, ungakha ukusatshalaliswa lakho siqu, lokhu kuvuselelwa sesifufula ngokwanele. Ngenxa ngesivinini, kungenzeka ukulanda ama-movie kusuka sesifufula ngokuchaza okuphezulu.
Izindlela eziningana ukuze uvule ikhibhodi-Windows
Sifunda indlela ukukhanya iPhone: amathiphu ambalwa
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ulayishe amavidiyo iPad usebenzisa iTunes
Ukuqinisekiswa ukuhambisana. Izimiso Izinhloso sokuhambisana
Ungakhetha kanjani izibani zokuhamba emotweni? Ukubuka konke, izinhlobo, izici nokubuyekeza
Buka ama-movie ku-intanethi, ubuke ama-movie, ukhwaliti enhle
Umuthi 'Dekaris': yokusetshenziswa
Amadaka eMpini Yezwe Yesibili - i-USSR kanye neJalimane. Ukusetshenziswa kwemifino eMpini Yezwe II. "Katyusha" - umhlabathi weMpi Yezwe II